युक्रेनी कस्मेटिक्स: उत्पादकहरु र समीक्षा
आधुनिक युक्रेनी महिला एक धेरै हालै घरेलू निर्माता रहनसहन ध्यान आकर्षित। साँच्चै, धेरै अवस्थामा, यो विदेशी मिडिया गर्न गुणस्तरमा कमसल छ। र एक निश्चित प्लस युक्रेनी कस्मेटिक्स एक किफायती मूल्य छ भन्ने छ। लगभग 20 कम्पनीहरु को यस क्षेत्रमा संलग्न छन्, र यो यो 1991 अघि थियो भन्दा एकदम ठूलो छ।
कस्मेटिक्स को युक्रेनी उत्पादन धेरै विशेषता सुविधाहरू छ। सबै को पहिलो, लगभग सबै कम्पनीहरु एक औसत आय खरीदार द्वारा निर्देशित छन्, त्यसैले उत्पादनहरु छ एक एकदम कम मूल्य। सबैभन्दा सामान्यतः भनेर अनुहार, शरीर र कपाल हेरचाह गर्न अनुमति उपकरण द्वारा प्रदान को सम्पूर्ण दायरा बीचमा। तर सजावटी लाइन, एक सानो बिट निर्मित कि कारखाना। यसको उत्पादन घटक प्रयोग कस्मेटिक्स को युक्रेनी निर्माताहरु यस्तो फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी, अस्ट्रिया रूपमा देशका आयात। घरेलू तेल र बोट अर्क छन्। तथापि, वैज्ञानिकहरूले आफ्नै अद्वितीय व्यञ्जनहरु र योगों विकसित गर्दै छन्। अक्सर विदेशी Estheticians यसको आफ्नै धन को उत्पादन तिनीहरूलाई उधारो।
म 1991 मा स्थापित भएको थियो जो एक चिकित्सा केन्द्र, यो ब्रान्ड बाहिर थाले। कर्मचारी औषधीय जूका, मानव शरीर यसको प्रभाव अनुसन्धान मा लगे। विशेष घटक, यो supple र स्वस्थ बनाउन, छाला मा एक लाभदायक प्रभाव जो पहिचान गरिएको छ। यो वास्तवमा कस्मेटिक्स को श्रृंखला उत्पादन को सुरूवात लागि गति थियो। केन्द्र कृत्रिम अवस्थामा leeches को खेती मा लगे थियो (एक प्रविधिको विकास र प्रयोगशाला कर्मचारी द्वारा पेटेंट) एक कारखाना खोलिएको थियो जब। 1995 देखि क्रीम र छाला को लागि अन्य साधन को ठूलो उत्पादन गर्न थाले। कस्मेटिक्स को युक्रेनी निर्माता leeches एक निकाल्ने सहित धेरै प्राकृतिक सामाग्री, बनेको छ। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ, र पराबैंगनी रेज देखि छाला संरक्षण लागि हो। यो लाइन को क्रीम एक विशेष सुरक्षा जटिल, को epidermis को विशेषताहरु गर्न अनुकूल छ र अप गर्न5विभिन्न फिल्टरहरू बनेको छ जो प्रयोग किनभने तिनीहरूले युक्रेनमा Bestsellers भयो। तिनीहरूलाई बीच बच्चाहरु को छाला रक्षा गर्न हालतमा छन्।
Iren Bukur र आफ्नो उत्पादन
युक्रेनी जैविक कस्मेटिक्स ब्रान्ड प्रदान Iren Bukur। निर्माता को मुख्य विशेषता - प्राकृतिक सामाग्री को प्रयोग। उत्पादनहरु किन राम्रो सानो तखता जीवन हो भन्ने छ। यो मेकअप दुई महिला बीच सहयोग को परिणाम हो - Irina Bucur (अध्यक्ष) र लिडिया Moskalenko (औषधि विज्ञान को उम्मेदवार र एसोसिएट प्रोफेसर)। सबै धन, प्रिमियम छन् क्रमशः, र मूल्य एकदम ठूलो छ। हाल यो उत्पादनहरु को 40 प्रकार को उत्पादन। उनलाई, र (विरोधी उमेर बढन प्रभाव सहित) छाला हेरविचार उत्पादनहरु को माध्यम र शरीर को लागि तयारी बीच। विशेष लाइन पनि मौखिक गुहा लागि डिजाइन। यो युक्रेनी कस्मेटिक्स राम्रो सिद्ध छ र अद्वितीय कार्यक्रम, र बाल उत्पादनहरु। 80% प्राकृतिक तेल गर्न उत्पादन अप मा सामाग्री आफ्नो जीवन धन सानो परिमाणमा उपलब्ध र यसको आफ्नै स्टोर मार्फत बेचिन्छ सीमित।
सौन्दर्य छाला सौन्दर्य को व्यञ्जनहरु
कस्मेटिक्स को युक्रेनी निर्माता युरोप बाट कच्चा माल को आधारमा बनेको छ। यस प्रविधिको मुख्य वस्तु अधिकतम छाला हेरविचार सुनिश्चित गर्न cosmetology को क्षेत्र मा प्राकृतिक तत्व र नवाचारै को संयोजन छ। मिश्रको पानी इंगित गर्दछ कि कम्पनी को लोगो मार्क comprises। त्यसैले, धेरै सञ्चालन हालतमा कक्षहरू मा moisturization र चिस्यान अवधारणा निर्देशित छ। मूल्य निर्धारण नीति एकदम वफादार छ। विशेष ध्यान कोका को निकाल्ने संग antitselyullitny जेल हुनुपर्छ। यो पेटेंट कर्मचारीहरु को एक विशेष सेट छन्। साथै, यस युक्रेनी कस्मेटिक्स र पुरुषहरु को लागि शासक प्रदान: सौन्दर्य छाला राम्रो आफ्टरशेव उत्पादन गर्छ।
1,000 भन्दा बढी वस्तुहरू कम्पनी "Pixie।" उत्पादन कस्मेटिक्स निर्माताहरु को युक्रेनी पकड कम्पनी एक लाइन छैन। स्टील उत्पादन डा को सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात ब्रान्डहरु Sante, सैलून, "जडिबुटी जादु", "ग्रीन फार्मेसी", O'Herbal। डा Sante उत्पादनहरु छाला हेरविचार हात लागि उत्पादन गरिएको छ, अनुहार। व्यञ्जनहरु सोभियत परम्परा र cosmetology को क्षेत्र मा नवीनतम उपलब्धिहरू कसरी आधारित छन्। Characteristically, सबै उत्पादनहरु hypoallergenic, हो त हरेक महिला लागि उपयुक्त छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा - यो लागू पहिलो डायर ब्रान्ड प्रयोग जो, aquaporins को प्रविधिको केही मा। सैलून - यो कि कपाल र नङ को उत्पादन मा माहिर एक ब्रान्ड हो। यो ब्रान्ड को युक्रेनी व्यावसायिक कस्मेटिक्स दुवै सैलून र घर मा प्रयोग गरिन्छ। विशेष चिकित्सा वार्निश, जो कार्य अवस्थित समस्या निर्देशित छ (fragility, विपाटन, को नङ प्लेट को कुनै न कुनै सतह) विकास भए। उत्पादन ब्रान्ड "ग्रीन फार्मेसी" विविधता स्ट्राइकिङ्। बाहिर फुलेको नसाहरु को रोकथाम, edema लागि खण्डका चिह्न विरुद्ध क्रीम, समावेश जो expectant आमा, को लागि श्रृंखला खडा। "जादू जडीबुटी" - औषधीय बिरुवाहरु को अर्क को 90% भन्दा बनेको छ जो युक्रेनी प्राकृतिक कस्मेटिक्स छ।
युक्रेनी सजावटी कस्मेटिक्स
युक्रेन धेरै उद्यम सजावटी कस्मेटिक्स को उत्पादन मा लगे। तिनीहरूलाई को - LORINA कस्मेटिक्स। गुणस्तर प्याकेज को, उच्च स्टाइलिश र आधुनिक डिजाइन छ, रंग असाध्यै व्यापक छ: यो कम्पनीको उत्पादन सम्मानित छ। दायरा lipsticks र glosses, पेंसिल, काजल, जग, संकुचित र छाडा पाउडर समावेश छ। पनि विभिन्न सेट उपलब्ध मैट,: छाया को चमकदार, सुखा। को प्यालेट विविध छ, सबैलाई सही छाया पाउन सक्नुहुन्छ। अझै पनि नङ को एक श्रृंखला उत्पादन: यो एक सजावटी कोटिंग, र विशेष उपचारात्मक र restorative कोटिंग्स रूपमा छ। 2013 मा LORINA कस्मेटिक्स शीर्षक "उद्योग नेता 2013" कमाए। दायरा निरन्तर नयाँ उत्पादनहरु संग अद्यावधिक गरिएको छ। किफायती मूल्यहरु यो सजावटी कस्मेटिक्स उपलब्ध, त्यसैले सन्तुष्ट ग्राहकहरु संख्या मात्र बढ्दै छ।
सजावटी उत्पादनहरु कम्पनी रंग मलाई
यो ब्रान्ड 1999 मा उत्पत्ति। कम्पनी को peculiarity उत्पादनहरु मात्र युक्रेन र विदेश (जर्मनी, फ्रान्स) मा उद्यम द्वारा उत्पादित गर्दै छन् भन्ने छ। मिति गर्न, युक्रेनी कस्मेटिक्स बनाउन-अप गुणस्तर र विविधता धेरै महिलाहरु हृदयमा जित्यो। मेकअप लाइन कोलैजेन को उत्पादन प्रोत्साहित गर्न सक्ने पदार्थ बनेको छन् फरक lipsticks प्रतिनिधित्व छ। तिनीहरूले, एक धनी रंग छ आफ्नो प्रतिरोध राख्न र वातावरण को हानिकारक प्रभाव देखि ओठ सुरक्षा। यो युक्रेनी कस्मेटिक्स मात्र सकारात्मक समीक्षा, विशेष गरी स्पष्ट र लगातार लाइन आकर्षित जो परेलाहरु र Pencils लागि दुकानदारों काजल लोकप्रिय छ। को विविधता धनी छ: यसलाई उत्कृष्ट बनावट र विभिन्न प्रजातिका छाया संग नङ Polishes र पाउडर छ।
एक कि व्यावसायिक प्रयोगको लागि उपकरण को उत्पादन मा विशेषज्ञ केहि कम्पनीहरु को। यो ब्रान्ड को उत्पादनहरु बीच मालिश लागि मास्क, peels, स्पा-प्रक्रिया को लागि उत्पादन को सबै किसिमका, साथै उपकरण हो। बोट अर्क, जो युक्रेन को क्षेत्र मा बढ्न को उत्पादन प्रयोग गरिएको। कारण एलर्जी प्रतिक्रिया को जोखिमको न्यूनतम छ। यो ब्रान्ड को उत्पादनहरु छाला अवस्थाको सही निदान गर्न र सही लागूपदार्थ टिप्न सक्षम छन् जो केवल व्यावसायिक beauticians प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
Piel प्रसाधन - व्यावसायिक कस्मेटिक्स को उपखाडी मा लगी भएको छ कि अर्को कम्पनी। को योगों सक्रिय पदार्थ को एक उच्च एकाग्रता समावेश गर्दछ। एकदम ठूलो पैकिंग - tonics 750 milliliters मा हालिएको। एक विशेष सुविधा घर मा लागूपदार्थ प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ। कम्पनी धेरै उत्पादन लाइनहरु: समस्या र परिपक्व छाला को हेरविचार, अनुहार हेरविचार को एक आधारभूत सेट, परेलाहरु बलियो बनाउन बाल मतलब। पनि विविधता जो बीच विशेष ध्यान विरोधी सेल्युलाईट दिनुपर्छ शरीर, को लागि एक विशेष स्प्रे छ। छैन भुक्तानी ध्यान र मानिसहरू - यो युक्रेनी कस्मेटिक्स नै कम्पनी आफ्नो छाला को लागि उपयुक्त शेविंग पछि जेल उत्पादन गर्छ। तर उत्पादन Piel प्रसाधन मूल्यहरु एकदम उच्च हो, त्यसैले यसलाई टाढा प्रत्येक किन्न सक्छन्। तर, निर्माता घर-उपयोग खपत सानो छ भन्ने सुनिश्चित र धन मालिकको छाला को लामो समय लिन हेरविचार लागि प्रयोग गरिने छ।
संयुक्त ब्रिटिश-युक्रेनी कम्पनी NATURE.med
यो कम्पनीको peculiarity उत्पादनहरु युक्रेनमा उत्पादित गर्दै छन् कि, र निरूपण ब्रिटिश विशेषज्ञहरु द्वारा विकसित छ। को epidermis को गहिरो तहहरूमा भित्र पस्नु र छाला moisturize गर्न सक्ने विशेष पदार्थ - उत्पादन flavones प्याज प्रयोग गर्दछ। साथै, तिनीहरूले एउटा उच्चारण विरोधी-जीवाणु र विरोधी भडकाऊ प्रभाव छ। Characteristically, गंध घटक गर्दैन। दायरा प्याज र लसुन घटक बनेको जो उत्पादनहरु बाल लागि सामेल छन्। कम्पनी पनि पाठ्यक्रम, हात moisten गर्न, र, जटिल व्यक्ति कुनै न कुनै छाला एडी लागि सुविधाहरु, छ। यो उत्पादन सकारात्मक महिलाहरु बारेमा समीक्षा सन्तुष्ट थिए। यसबाहेक, लोकतान्त्रिक मूल्य निर्धारण नीति, उत्पादन किफायती छ।
कस्मेटिक दर्पण Babyliss 8438E: विनिर्देशों, समीक्षा, मूल्यहरू
जब बीउ जमाना मरिच? जब बिरुवा लागि मरिच बीउ रोपेर र बिरुवा कसरी बढ्न
फाइबर-ओप्टिक संचार लाइनहरू - भविष्यको प्रविधिहरू
यो के तपाईं ईर्ष्या गर्न असम्भव छ र? ईर्ष्या के हो
उत्तम हुनुहोस्। लडाइँ मुक्त (दागस्तान)
कसरी बनाउने गुलाब-किण्वित